भागवन्डाको राजनीतिले ल्याएको तरंग ! « Khabar24Nepal
खिमराज गिरि पढ्न लाग्ने समय : ४ मिनेट
देशमा जवसम्म राजनीतिक स्थिरता हुंदैन तवसम्म न समाज सुधृन्छ न त आर्थिक बिकासको गति अगाडि बढ्छ । दक्षिण एशीयामा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक बिकासमा पछि परेका विभिन्न देशहरुमध्ये अफगानिस्तान पनि एक हो । गत हप्ताको एक दैनिक पत्रीकामा लेखिएको थियो :
” राजनीतिमा नैतिकताबिहीन पार्टी र नेतृत्व, कामचोर र नाफाखोर कर्मचारी प्रशासन, चार दशक भन्दा बढी गृह र बाह्य युद्दले क्षत- बिक्षत समाज, सामाजिक सम्बन्ध च्यातिएर गहिरिएको बर्गीय र लैंगिक खाडल, अनि जनमतलाई बिदेशी स्वार्थमा धरौटी राख्ने राजनीतिक संस्कारको दुश्चक्रममा निर्दोष अफगान जनता फँसेका छन । र अपेक्षा गरेका छन बिदेशी सहयोगको तर दक्षिण एशियाका कुनैपनि रास्ट्र सहयोग गर्न तम्सिएका छैनन । तसर्थ अफगानिस्तानको भावी नेतृत्वले पनि चुनौतीकै चाङमा शासन गर्ने हो । किनकि पश्चिमाहरुको उध्येश्य फुटाउने र लुट्ने नै हो । ” गत हप्ताको एक रास्ट्रीय दैनिकमा अफगानिस्तानको द्वन्द्ववारे लेखिएको एक लेखको केही हरफहरु आज पनि पस्किदै गर्दा नेपालको राजनीतिक गतिबिधिवारे लेख्न मन लाग्यो ।
अहिले नेपालमा गठबन्धनको सरकार छ । करिब ५५ दिन भयो सरकार गठन भएको मन्त्रीमन्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सायद यहि कमजोरीको फाइदा उठाएर होला भारतीय एसएसबीको अकर्मन्यताको कारण नेपाली युवकले तुइन तर्न लाग्दा ज्यान गुमाउनु पर्यो । छानवीन आयोगको प्रतिबेदनमा उनीहरुकै गल्ती देखियो तर सरकार मौन छ र जवाफ दिन नसकिरहेको बेलामा फेरि भारतीय पक्षले नेपालको दार्चुला जिल्लाको खलंगाको आकाशमा हेलिकप्टर उडान गरेसंगै वातावरण झन तरंगीत हुन थालेको छ । यसमा सेनाले पनि आपत्ति जनाएको छ भने पररास्ट्रमन्त्रीसमेत आफै भएका प्रधानमन्त्रीले तुइन कान्डको जानकारी अहिले सम्म भारतलाई नगराएको भन्ने समाचारले त झन नेपाली जनताहरु आक्रोस छन । यस मामलामा औपचारिक प्रतिकृया दिनको लागि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले आनाकानी गरिरहेका छन । यसरी भारतले नेपालको धेरै भागको सीमाना दैनिकजसो मिचिरहेको छ भने यता नेपाल सरकार भने सत्ता टिकाउनको लागि भागबन्डामै ब्यस्त भएको भन्दै बिरोधका आवाजहरु गुन्जिरहेका छन । अहिले सत्तारुढ दलहरु दामी मन्त्रालयको आशमा रुमलिएर शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन भने विशेषगरी कम्युनिस्ट घटकहरु अघिल्लो सरकार ढालेको मूल्य चर्कै लिने दाउमा छन । उता एमसीसीको बहस ब्यापक भैराखेको बेलामा सरकारले करिब सात बुंदामा स्पष्ट् पार्नको लागि वाशिङ्टनलाई पत्राचार गरेको छ । त्यसैले जुन बुद्दिजीवीले जेसुकै कुरा बकेपनि अवका दिनमा नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा त्यति सजिलै सहजता आउँने छाँटकाँट देखिदैन । अहिले देउवा प्रतिपक्ष दलका नेतासंग भेट्दैमा त यस्तो हंगामा मच्चीएको छ भने राजनीति हो, भोलीका दिनमा देउवा र केपीको सहकार्यता नहोला भन्न सकिन्छ र ? यदि भैहाल्यो भने अहिले चुरीफुरी देखाउनेको हविगत फेरि भित्तामै पुग्यो भने पनि नेपालको राजनीति हो, आश्चर्य मान्नु पर्दैन । खास त अहिलेको राजनीतिमा तरंग ल्याउने मूख्य पात्र माधवकुमार नेपाल को हु त ? अनि उनलाई पार्टीप्रति किन तृष्णा जाग्यो त ?
ब्रिटिश इन्डियासँग सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने चन्द्रशेखर उपाध्याय , उक्त सन्धिपछि नेपालमा आफूप्रति बढ्दो असन्तुष्टि छल्न भारतको बेतिया बसाइँ सरे । उही नकरात्मक इतिहासका विरासत हुन् मंगल कुमार उपाध्याय …. मंगलकुमारका जेठा छोरा तुलसीप्रसाद उपाध्याय पनि भारतमै जन्मेका हुन् । नेपालमा राजनीति गर्ने भएकाले र चन्द्रशेखरको इतिहास नजोडियोस् भनेर तिनै तुलसीप्रसादले आफ्नो नाम र थर दुवै फेरेर माधवकुमार नेपाल कायम गरे । उनका बाँकी भाइहरूले अझै पनि थर उपाध्याय नै लेख्छन् । आफ्नो भूमि भारतमा जायजन्म भएकोले भारतले माधवकुमार नेपालको माध्यमबाट २०४६ साल मै भारतीय सेना ल्याएर भएपनी देशमा गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्न लगाएको थियो भने गणतन्त्र पछि सांसद नहुँदा पनि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ठूलो योगदान गरेको थियो ।
ईतिहासका पानाबाट साभार गरिएको यो कथन सायद सत्यतामा आधारित छ नै । हाल केही वर्षदेखि नेपाल पार्टी एमालेसंग भन्दा पनि ब्यक्ति केपीसंग बढी रुष्ट थिए । किनकि , अघिल्लो महाधिबेसनमा अध्यक्ष पदमा केपीसंग पराजित नेपाल तत्कालिन समयदेखि केपीसंग प्राय बिमति राख्दै आए र नेकपाको करिब दुइ तिहाईको सरकाका पीएम केपीलाई पदच्युत गर्न सहपाठी प्रचन्डसग मिलेर हर प्रयत्न गरे । अन्तमा केही शिप नलागेर ६१ सिटे देउवाको हातमा सत्ताको चावी सुम्पेर बल्ल निद हराम भयो उनको । अन्तमा केपीले पार्टी मिलनको लागि हर प्रयत्न गर्दा पनि उनी पहिल्यै बिदेशी तथा स्वदेशी ग्र्यान्ड डिजाइनमा फंसिसकेका थिए । पछि देउवालाई दल बिभाजन गर्न सहज वातावरण बनाउन बाध्य पारे र दल विभाजनको लागि संसदीय दल या केन्द्रीय कमिटीमा बीस प्रतिशत कोरम पुगे हुने भनेर अध्यादेश नै ल्याउन लगाएर निर्वाचन आयोगमा नयां पार्टी दर्ता गरे । तैपनि अहिले भागवन्डाको नाममा देउवालाई अझै सरकार गठन भएको ५५ दिन पुगिसक्दा पनि मन्त्रीमन्डल गठन गर्न दिएका छैनन । किनकि दुइ खलपात्र मिलेर अझै के कुरामा अत्तो थापेर नै देउवाले बाध्य भएर आफ्ना दुतलाई बालकोट पुर्याए । यसरी नेपालको राजनीति बिग्रेकै ब्यक्तिगत कुन्ठा र बिदेशी प्रभुको आशिर्बादले हो रहेछ भन्दा अतियुक्ति नहोला कि !
ट्रकले ठक्कर दिँदा भक्तपुरमा एक पैदलयात्रुको मृत्यु
कुर्सीको लागि विवाद हैन, विचारको बहस गरौंः मुख्यमन्त्री पोखरेल
सर्लाहीमा पेस्तोल र गोली सहित पक्राउ